स्कुलमा नआउने विद्यार्थीका अभिभावकलाई ‘रातोकार्ड’ | Educationpati.com
२०७६ भदौ २६ गते ०९:४९मा प्रकाशित
विद्यायलमा कुन शिक्षक कति बजे कक्षामा प्रवेश गरे? कति मिनेट पढाए? कक्षा घण्टी सकिएको कति मिनेटपछि कक्षा छोडे? लगायतका विषयमा विद्यार्थीले शिक्षकको हाजिरी लगाउने गर्छन्।
विद्यालयले अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पनि हाजिरी गराउने गरेको छ। जसले अभिभावक विद्यालय, आफ्ना छोराछोरीप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमार देवकोटाले बताए। उनका अनुसार वर्षभरी विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने अभिभावकलाई वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने दिन पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ।